चलचित्र क्षेत्र जोगाउने कि महानायक विवादमा अल्झिने ? – Padhnekura
चलचित्र क्षेत्र जोगाउने कि महानायक विवादमा अल्झिने ?
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा पछिल्लो समय विभिन्न विषयले विवाद बढाइरहेको छ । विशेषगरी अग्रज कलाकार र अनुज कलाकारबीचको विवादले चलचित्र क्षेत्रमामात्रै होइन यसले सिङ्गो समाजलाई बहसमा ल्याइरहेको छ । नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले अभिनेता भुवन केसीलाई लगाएको आरोपले भन्दा कलाकार दीपाश्री निरौलाले ‘महानायक’बारे व्यक्त विचारले बहसलाई बढोत्तरी दिइरहेको छ । यी घटनाका सेरोफेरोमा कलाकारको अभियानदेखि सम्बन्धले पनि उत्तिकै चर्चा पायो ।
तर, अभिनेता राजेश हमाललाई ‘महानायक’को रुपमा स्वीकार्ने वा नस्वीकार्ने विषयले कलाकारदेखि दर्शकसम्मलाई विभाजित गरायो । कलाकार दीपाश्रीले आफूले राजेश हमाललाई महानायक होइन भन्न नखोजेको आफ्नो अभिव्यक्तिलाई सच्याएकी छन् । दीपाश्रीसँगै जोडेर कलाकार दीपराज गिरीको पनि आलोचना भयो । दीपकराजले पनि राजेश हमाल महानायक नै हुन् भनेर आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे । तर, ‘महानायक’ विवाद साम्य भएको छैन ।
कलाकारबीचको यो विवाद यस्तो बेला भइरहेको छ, जुन बेला चलचित्र क्षेत्रको भविष्य अन्योलग्रस्त छ । धराशयी बनेको आफ्नो क्षेत्रको रक्षामा लाग्नुपर्ने बेला स्वयम् कलाकारहरु विवादमा आइरहेका छन् । कुन कुन मापदण्डभित्र परेका नायकलाई महानायक भनिने हो ? सायद नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यसको कुनै मापदण्ड छैन । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा महानायक घोषणा गरिँदा लिइएका मापदण्ड र आधार नेपालमा अहिले देखिएको विवाद समाधानको उपाय हुन सक्छ । तर, जनता वा दर्शकले रुचाइएका र दिइएका अलंकार पनि विवाद समाधानको कसी हो ।
प्रविधिको यस युगमा यस्ता विवादित विषयमा जनमत लिएर निचोडमा पुग्न सकिन्छ । तर, विवाद समाधान गर्नुभन्दा लम्बाइएको देखिन्छ । अग्रज कलाकारहरुले यसबारे सामूहिक धारणा सार्वजनिक नगर्दा पनि झनै नेपाली चलचित्र क्षेत्र विवादको भुँमरीमा फसेको छ । यसको घाटा दर्शक र कुनै एक कलाकारलाई होइन सिङ्गो चलचित्र क्षेत्र र यससँग जोडिकएका हरेक व्यक्तिलाई नोक्सानी गर्नेछ ।
महानायक विवादले पछिल्लो समय केही हदसम्म नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई गति दिन अहंमभूमिका निर्वाह गरेका दीपक र दीपाश्रीलाई बहिस्कार गर्नेसम्मको कुरा आयो, यसले अरुलाई होइन चलचित्र क्षेत्रलाई नोक्सानी गर्ने हो । महानायक विवादले दीपाश्रीले खेलेको चलचित्र बहिस्कार गर्नेहरुले मुलुकको सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रियतामाथि प्रहार गर्ने भारतमा बनेका बलिउड चलचित्र हेर्न छाड्लान् ? यो प्रश्न टड्कारो रुपमा उभिएको छ ।
नेपाली चलचित्रले बलिउडलाई विस्तारै विस्थापित गर्दै जान थालेको यस अवस्थामा कलाकारबीचको विवादले स्वयम् कलाकारहरुलाई नै नोक्सानी गर्ने अवश्यम्भावी छ । चलचित्र क्षेत्र धराशयी बनेको अवस्थामा कलाकारबीचको विवाद र विवादमा ल्याउने कार्यले नेपाल चलचित्र उद्योगमा ठूलो घाटा पुर्‍याउनेतर्फ कसैको ध्यान गएको देखिँदैन । कोरोनाभाइरसको चपेटामा परेको नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई जोगाउन र यसमा निर्भर रहेका कलाकारको कला क्षमतालाई जीवितै राख्नुको आजको आवश्यकता हो ।
कलालाई व्यवसाय बनाएर आफ्नो दैनिक गुजरा चलाइरहेका कलाकार र उदाउँदै गरेका भविष्यका कर्णधार कलाकारहरुको संक्षरण गर्नुपर्ने अवस्थामा अग्रज र अनुजबीच तथा कलाको प्रचार प्रसारमा अहमभूमिका निर्वाह गरेका पत्रकार र कलाकारबीचको जुँगाको लडाइँले कुनै व्यक्ति विशेषलाई फाइदा देला, तर सिङ्गो चलचित्र क्षेत्रलाई भने ठूलो नोक्सानी गर्ने अवश्यम्भावी छ । Source : CanadaNepal.com
Previous Miss Nepal 2020 deadline extended till July last
Next नेपाली गीत गिनिज वर्ल्ड रेकर्डमा